Shirka Wada tashiga doorashooyinka 2016 oo laga soo saaray war murtiyeed – STAR FM SOMALIA
Shirka Wada tashiga doorashooyinka 2016 oo laga soo saaray war murtiyeed
Somalida ku nool dalka Kenya oo dhac loo geeystay
Maamulka Gobolka Banaadir Oo wasa Diyaar Garowgii Udambeeyay Ee Todobaadka Xurriyadda
Madaxda DF Iyo Madaxda maamul Goboleedyada Oo Shir Isugu Imaanaya, Kadib Heshiiskii La Gaaray
Kalluumeysatada somaliya oo soo dhaweeyay heshiiskii ganasi ee dhaxmaray Soomaaliya iyo Itoobiya
Madaxweynaha maamul Gobileedka Hirshabeele oo war ka soo saaray Dilkii Guddoomiyaha dhalinyarada Gobolka Hiiraan
Iyadoo shalay magaalada Muqdisho lagu soo gaba gabeeyay shirka labaad ee madasha wada tashiga qaran ee looga hadlayay hanaanka doorasho ee sanadka 2016 ka dhici doona shirka ayaa laga soo saaray war murtiyeed ka kooban todobo qodob.
Inkastoo Madaxda Soomaalida uu is mari waa ka dhex taagnaa qaabka doorsho ee dalka ka dhici doonta sanadka 2016, hadana is jiid-jiid dheer kadib waxaa la wada qaatay labadii qodob ee la isku hayay, iyadoo si isku dheeli tiran loo wajahayo.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo shirka ka hor akhriyay qodobada madasha ayaa sheegay in qodobadan ay yihiin kuwo muhiim ah, isla markaana Madaxda isku raaceen.
Qodobada ugu muhiimsanaa ee ku xusnaa war murtiyeedka Madashan labaad ee Wadatashiga Qaran ayaa waxaa ka mid ahaa:-
1. Inaysan jirin wax muddo kororsi ah marka uu dhammaado xilliga muddada dastuuriga ee hay’adaha dowladda.
2. Dhismaha Aqalka Hoose iyo Aqalka Sare waa inay qayb ka ahaadaan hannaanka doorasho ee sannadka 2016-ka.
3. Doorashada labada aqal waa inay ku saleysnaadaan isku dheelitir qabiil iyo degaan.
4. In ergooyin doorasho ay ka qeyb qaataan doorashada xildhibaannada Baarlamanka, taas oo ka dhacaysa caasimadaha dowlad goboleedyada. Ergooyinka waa inay metelaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka, dhalinyarada iyo ururrada bulshada .
5. Inay jirto kuraas cayiman oo ka mid ah labada aqal, kuwaas oo loo qoondeeyay haweenka. Waa in la xoojiyaa xuquuqda dhalinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay.
6. In la isku raaco qorshe hawl-fulin siyaasadeed cad oo qeexaya meel marinta hannaanka doorasho ee sannadka 2016-ka, iyo mid kale oo caddeynaya sidii dalka doorasho qof iyo cod looga hirgelin lahaa sannadka 2020-ka. Qorsheyaashan waa inay qeyb ka noqdaan heshiiska kama dambeysta ah ee hannaanka doorasho ee sannadka 2016-ka.
7. Kadib wadatashi ay hoggaamiyeyaashu ugu noqdaan degaannadooda, waa in faahfaahinta kama dambeysta ah ee hannaanka doorasho ee sannadka 2016-ka, iyo qorshe fulineed la isku raacaa, kulanka lagu qaban doono magaalada Kismaayo 10-ka bisha Janaayo sannadka 2016-ka.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Jawaari oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in aan la garab marin Baarlamaanka, isagoo xusay in qodobadan iyo dhamaan kulamada wada tashiga waxyaabaha ka soo baxa la hor-keeni doono Baarlamaanka, si uu u meel mariyo.
Ciyaarta Final-ka ee Koobka Jen. Daa’uud oo markii u horeysay si toos ah looga daawanayo TV-ga
Ciidamada dawlada soomaaliya ayaa waxaa duleedka afgooye lagula eegtay qarax
Magaaladdda Nairobi Gaar ahaan Xaafadda Islii oo Soomali badan ay kunool yihiin ayaa maal mihii lasoo dhaafay waxaa kusoo badtay Burcad moobilada ka dhaca somalida ku nool xaafada Islii
tuugadan ay si gaar ah u beegsanayaan Soomaalida oo kaliya, isla markaana ay wataan Mootada labada lug leh, iyaga oo markii ay taleefoonka kaa dafaan cararaya.
Qaar ka mid Soomaalida taleefoonada laga dhacay ayaa sheegeen in arrintaan ay jirtay maalmihii la soo dhaafay dad badan oo Soomaali ahna la dhacay, waxaana ayna dowladda Kenya ugu baaqeen inay arrintaan ay waxka qabataan
Dhacaan ayaan imaanaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay kordheen falalka afduubka ah ee loo gaysto Soomaalida ku nool Kenya, gaar ahaana xaafadda Islii
Maamulka Gobolk Banaadir ayaa Wada diyaar garowgii udambeeyay ee toddobaadka xorriyadda oo lagu diyaarinayo qurxinta Waddooyinka waa weyn ee caasimadda Muqdisho.
Waxaa saakay kormeer ku tagay goobaha ay Shaqadu ka socoto Agaasimaha Guud ee Arimaha Bulshada ahna ku simaha Guddoomiye kuxigeenka Arrimaha Bulshada Maamulka Gobolka Banaadir Mohamed Ahmed Cantoobo oo aay wehlisay Agaasimaha Waaxda Beeraha iyo Jardiinooyinka.
Ra’iisul Wasaaraha Dalka Maxamed Xuseen Rooble, Madaxda dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa xalay kulan ku yeeshay qadka Internet-ka gaar ahaan aalada ZOOM-ka…
Kulankaan oo ahaa midkii ugu horreeyay kadib saxiixii heshiiskii doorashada laga gaaray ayaa waxaa looga hadlay dardar-gelinta heshiiskii doorashada dalka ka dhaceysa, iyagoona inta uu socday kulanka Go’aan ku gaaray.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Madaxda isku raaceen in Shir isugu yimaadan Rooble, Madaxda maamul Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, kaasi oo ka dhici doona Magaalada Muqdisho.
Shirkaas ayaa la qorsheeyay inuu Caasimadda dalka ka furmo maalinta sabtida soo socota, isla markaana maalmaha soo socda Madaxda dowlad Goboleedyada ay soo gaari doonaan Muqdisho, si ay uga qeyb galaanka Shirka furmaya.
Shirkan Madaxda ayaa looga hadli doonaa dardar gelinta doorashada dalka ka dhaceysa, iyadoo Guddiga farsamada uu magacaabay Ra’iisul Wasaaraha ay hordhigi doonaan Golaha Wadatashiga Qorshayaasha doorashada.
Ra’iisul Wasaaraha Dalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa la filayaa inuu magacaabo Guddiga dib u heshiisiinta Heerka Wasiir ee afarta Dowlad Goboleed oo aan ku jirin Jubbaland, kuwaasoo Garbahaarey u tagaya xalinta arrinta Gedo.
Madaxweynaha Dalka oo Bogaadiyay Dadaaladda Xukuumadda ee awood siinta ganacsatada Soomaliyeed
Madaxweynaha maamulka Goboleedka Koonfur Galbeed oo Bulshada Waajid kala hadlay furitaanka wadooyinka uxiran Al-shabaab
Maamulka Gobolka Banaadir Oo Taagero Ka Helay Turkiga.
Lafta-gareen iyo Wafdi uu Hogaaminayo Ayaa Gaaray Degmada Waajid ee Gobolka Bakool.
Janan Ayaa Safar ugu Ambabaxay Dalka Itoobiya.
Wasiir ku-xigeenka Warfaafinta Oo Gaaray Cadaado.
Madaxweyne Farmaajo Oo Hadbalyo U diray Antonio Guterres.
Madaxweynaha Soomaaliland Oo Maanta Daah-Furay Imtixaanaadka Shahaadiga.
Muwaadinka Soomaaliyeed Oo Lagu Dilay Dalka Koonfur Afrika.
Soomaaliya Oo Ka Qeyb Galaysa Shurka Antalya.
Madaaxweynaha Wadanka Nigeria oo ku baaqay dagaal ka dhan ah Boko Haraam
Madaxweynaha Maamulka Jubland oo Gudoomiyay shirka Golaha Wasiirada .
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Oo shir gudoomiyay kulan looga hadlayay horumarinta Daqliga gobolka Banaadir
Barlamaanka maamulka Puntland oo dood kayeelanaya Shirkadda DP world
Madaxweynaha Dalka oo ku wajahan Turkyga
Wasiiradda Arimaha Dibadda Somaliya iyo kan Knya oo Wada Hadlay
qasaaro dhimasho Iyo Dhaawac ka dhashay Shil gaari oo K dhacay Dowlad Deegaanka Soomalida
Wararka2 months ago
News In English3 months ago